LEGO Minecraft Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
LEGO Minecraft Black Friday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်
ပိတ်ဆို့နေသောကမ္ဘာ Minecraft ပြီးပြည့်စုံသော p ဖြစ်သည်artblocky လောကအတွက် ner Lego အုတ်များ - နှင့် ရက်ရောမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်နိုင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ လျှော့စျေးများ။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နေသည့်အရာအားလုံးကို မြင်နိုင်သည်။ Lego Minecraft နေစဉ်အတွင်း Black ကသောကြာနေ့ 2021 ။
နောက်ဆုံး LEGO Minecraft Black Friday လျှော့စျေး
Zavvi UK နှင့် USA တို့သည် တစ်ခုစီတွင် လျှော့စျေးများစွာကို ပေးဆောင်ကြသည်။ Minecraft မော်ဒယ်များ။ Firestar ကစားစရာ အတွက်လည်း အထူးသီးသန့်လျှော့စျေးကို ပေးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Brick Fanatics စာဖတ်သူများ၊ Minecraft ထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်။ သင့်မှာယူမှုအတွက် 10% လျှော့စျေးအတွက် ငွေရှင်းချိန်တွင် BF10 ကို ထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လျှော့စျေးများကို ကြည့်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့ ကာလ; ဒီ page ကို နေ့တိုင်း update လုပ်ပါမယ်။
21174 အဆိုပါခေတ်သစ် Treehouse - ယခု£ 99.99, £ 81.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
21160 အဆိုပါ Illager စီးနင်းမှု - ယခု£ 64.99, £ 47.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
21173 က Sky မျှော်စင် - ယခု£ 54.99, £ 41.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21154 အဆိုပါ Blaze တံတား - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
21159 အဆိုပါ Pillager တပ်စခန်း - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
21160 အဆိုပါ Illager စီးနင်းမှု - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
21170 အဆိုပါဝက်အိမ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
LEGO Minecraft Black Friday လျှော့စျေး
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတိမမူမိ Lego အဖွဲ့၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအစုစု၊ Lego Minecraft ကုမ္ပဏီ၏အကြမ်းခံဆုံးသောဗီဒီယိုဂိမ်းအခင်းအကျင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အစောပိုင်းမှစတင်ထွက်ခွာကတည်းကစင်ပေါ်တွင်ရှိနေခဲ့သည် Lego Ideas ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ပြသရန်ပြန့်ပြန့်စုံစုံလင်လင်ပါ ၀ င်ပြီးစျေးနှုန်းအချက်အလတ်များနှင့်၎င်း၏မတူကွဲပြားသောအရောင်အသွေးစုံလင်သောတည်ဆောက်မှုများဖြင့်အသက်အရွယ်မရွေးဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
သင်ဟာကြီးထွားဖို့စျေးကွက်ထဲရောက်နေရင် Lego Minecraft စုဆောင်းမှု, Black ကသောကြာနေ့ ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အရေးကို တင်ဆက်သည်- ဆောင်ပုဒ်၏အစုံလိုက်အများအပြားသည် လျှော့စျေးဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သည်သာမက၊ Lego အဖွဲ့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း၏စျေး ၀ ယ်ပိတ်ရက်တလျှောက်တွင်လက်ဆောင်များနှင့်အတူအပိုဆု VIP အမှတ်များကိုပေးသည် Lego ဘတ်ဂျက်။
LEGO Minecraft Crafting Box Black Friday အပေးအယူ
21161 အဆိုပါ Crafting Box ကို 3.0 အစစ်အမှန်နှင့်နီးစပ်သည် Minecraft မင်းရနိုင်သလောက် Lego အုတ်များ၊ blocky virtual world sandbox ကိုအကြောင်းအရာအလိုက်နှင့်လက်ထပ်သည် Lego အပိုင်းပိုင်းများနှင့် minifigures အပိုင်း ၅၆၄ တွင် Steve, Alex နှင့် Creeper minifigures များပါ ၀ င်သည်။ ရဲတိုက်နှင့်ခြံတည်ဆောက်ရန်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်။ အခွင့်အလမ်းများသည်အဆုံးမရှိသော်လည်းဤအရာကိုအသန့်ရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်စေသည် Lego Minecraft ပတ်ဝန်းကျင် အတွေ့အကြုံများ - ထို့ကြောင့် ကာလအတွင်း စောင့်ကြည့်ရန် တစ်ခု Black ကသောကြာနေ့.
LEGO Minecraft ကိန်းဂဏန်းများသည် Black Friday အပေးအယူများဖြစ်သည်
အားလုံးနီးပါးတွင်ပါဝင်သည် Minecraft Lego အစုံများသည် block-headed minifigures များနှင့်တည်ဆောက်နိုင်သောလူအုပ်များဖြစ်ပြီးသင့်အားစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည် Minecraft Lego နှိုင်းရလွယ်ကူသောကိန်းဂဏန်းများ။ Black ကသောကြာနေ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ရန်သာ ရှာဖွေသင့်သည်။ Lego Minecraft အက္ခရာများသည် ပို၍ ရိုးရှင်းသည်၊ chartစတိဗ်၊ Creeper၊ နွားများ၊ လင်းနို့များ၊ အုပ်ထိန်းသူများနှင့်အခြားအရာများအားလျှော့စျေး (မျှော်လင့်) စျေးနှုန်းများဖြင့်များများပေးပါ။
LEGO Minecraft အနားယူခြင်းသည် Black Friday သဘောတူညီချက်များ
နာမည်အကြီးဆုံးအချို့ Minecraft Lego အစုံအပါအ ၀ င်အငြိမ်းစားယူပြီးပြီ Lego Minecraft 21119 The Dungeon, 21128 The Village နှင့် 21137 The Mountain Cave - တို့နှင့်ကွဲပြားသည် Lego Minecraft အစုံသည် ၂၀၂၁ တွင်၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းသည် 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု နှင့် 21155 အဆိုပါ Creeper မိုင်း.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အစုံလိုက်စာရင်း အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးရန်၊ အားလုံးသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လျှော့စျေးများကို ခံစားနိုင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ စတော့ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ Lego -မည်သည့်လက်ဆောင်နှင့်မဆို ၀ ယ်ယူရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနေစဉ် Lego Group သည် ၂၀၂၁ အတွက်သိုလှောင်ထားသည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အားလုံးကိုရှာရန် Black ကသောကြာနေ့ 2021 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုသောအပေးအယူများ ၊ အားလုံးအတွက် ဤစာမျက်နှာကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ Lego Minecraft Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူ။